Zip Gadzira Chishandiso. Repair Zip Faira. Zip Gadzirisa Software.
DataNumen Zip Repair ndiro yakanakisisa Zip kugadzirisa uye kugadzirisa chishandiso pasi. Inogona kugadzirisa yakaora Zip mafaera uye kudzoreredza yakawanda yedata rako sezvinobvira, nokudaro uchideredza kurasikirwa muhuori hwefaira.
4.90 / 5 (kubva 1,642 mavhoti)
Sei DataNumen Zip Repair?
Kudzoreredza mwero ndiyo most kukosha kwakakosha kwe zip kupora chigadzirwa. Zvinoenderana nemiedzo yedu yakazara, DataNumen Zip Repair ine yakanakisa kupora mwero, zvirinani kupfuura chero vamwe vakwikwidzi, kusanganisira WinRAR nezvimwe zip maturusi ekugadzirisa, mumusika!
Dzidza zvakawanda nezvekuti sei DataNumen Zip Repair inoputa kukwikwidza
Ini ndanga ndichiedza kuvhura dura rine mafoto ekare, asi handina kukwanisa, nekuda kwekukanganisa. Ipapo ndakashandisa DataNumen Zip Repair ndokuita mashiripiti.
Ini ndanga ndichiedza kuvhura dura rine mafoto ekare, asi handina kukwanisa, nekuda kwekukanganisa. Ipapo ndakashandisa DataNumen Zip Repair ndokuita mashiripiti. Ndiri kufara kuti ndakawanazve mafoto angu. Ndatenda nechigadzirwa chako!
Ndinokutendai nokuda kwenyu zipkugadzirisa. Yakanga iri software huru yekugadzirisa yangu zip ikwidzwe.
Chirongwa chakakura chekudzorera ZIP matura. Ndinokurudzira ... uye yakapusa sedhoo.
DZIPR yakashanda zvishamiso & kudzoreredza mazana eMB emadhijitari mafoto andaifunga kuti ndaizo lost zvachose.
Munhu asingazivikanwe mutengi
Yakagadziriswa iyo Roti - Hupenyu Saver!
Ingo tora zvakare nezve 1GB yemifananidzo kubva Zip mafaira. Ndakafunga kuti ndakanga ndakaputirwa zvechokwadi asi DZIPR kungorima kuburikidza nemujenya
Ingo tora zvakare nezve 1GB yemifananidzo kubva Zip mafaira. Ndakafunga kuti ndakanga ndakaputirwa zvechokwadi asi DZIPR ingori yakarima kuburikidza nemujenya mune batch modhi. Handina kurasa kana pikicha. Yakapusa uye nekukurumidza kushandisa, futi. Haugone kuikurudzira zvakanyanya zvakakwana.
Ini ndakatsigira mamwe mafaera ku Zip faira kubva kuMac G4 kabhuku kangu. Ndakanga ndisina imwe sarudzo kunze kwekuvadzorera ivo kuPc, uye pakuyedza kusunungurazip, Ndakaona kuti
Ini ndakatsigira mamwe mafaera ku Zip faira kubva kuMac G4 kabhuku kangu. Ndakanga ndisina imwe sarudzo kunze kwekuvadzorera ivo kuPc, uye pakuyedza kusunungurazip, Ndakaona kuti hapana chaigona kuvhura chakaora 10.2 GB dura. Kunze kwekufungidzira, ini ndakadzora DZIPR, ndikaona kuti inogona kugadzirisa faira rangu, saka ndakaenda kumberi ndikaraira kuti ndibvise muganho weyedzo vhezheni. Ndakamhanya zvakare, uye painogadzira, kwete chete kuti yakawana imwe data, yakaitora YOSE! Ndiri kufara kwazvo kuti Tech Support yakapindura maemail angu nekukurumidza, uye ivo vaibatsira zvakanyanya (vachichinja yangu yakazara maonero e software tech tsigiro) Thanks nekugadzira yakadaro inobatsira. Pane zvirongwa zve OS X vhezheni chero nguva munguva pfupi?
Mushure mekugadzirisa batch, mafaera ese akagadziridzwa zvinobudirira uye ari kutora kune yangu mac kuburikidza windows PKZip uye yakatarwa SaMBa Network Drive. Ini
Mushure mekugadzirisa batch, mafaera ese akagadziridzwa zvinobudirira uye ari kutora kune yangu mac kuburikidza windows PKZip uye yakatarwa SaMBa Network Drive. Ndinofanira kusimbisa kuti ndinofara kwazvo kuti chigadzirwa chako chinoshanda nemazvo, uye kuti rutsigiro rwave rwakanakisa
Zvekuda, nekutenda zvakare
Chigadzirwa chakanakisa !! Ndakanga ndisina chokwadi asi zvakangowana kudzoreredza zip yeangu email yekuchengetedza uye ini ndashandurwa :)
Kutenda kuzhinji uye
Kutenda kwakawanda uye zvakanaka zvese
Inoshanda zvikuru. yakandichengetera mirwi yenguva pane kurodha pasi faira kubva kune imwe sosi nekuti iyo faira yakashata, chirongwa ichi chinoigadzirisa. A
Inoshanda zvikuru. yakandichengetera mirwi yenguva pane kurodha pasi iyo faira kubva kune imwe sosi nekuti iyo faira yakashata, chirongwa ichi chinoigadzirisa. Chirongwa chakajeka kwazvo !!!!!!!! *****
Ndakatsvaga nzvimbo post kurumbidza asi hapana chaakawana. Ini ndinoda kubatsira vamwe vanopinda munyatwa neyakaora zip faira. Ndave
Ndakatsvaga nzvimbo post kurumbidza asi hapana chaakawana. Ini ndinoda kubatsira vamwe vanopinda munyatwa neyakaora zip faira. Ndanga ndichishanda paPC kubvira 1982, pamberi peBMM kana Microsoft uye ichi ndicho chirongwa chekutanga chakashanda nekukurumidza, nyore uye zvinobudirira.
Handina kumbobvira ndawana zip chirongwa chekugadzirisa chakashanda.
ndakave nemitambo yakawanda, uye mamwe marudzi emafaira anga akaora, uye ndisati ndawana chirongwa ichi, yaivhiringidza komputa yangu, iyi ndeimwe yeiyo
ndanga ndiine mitambo yakawanda, uye mamwe marudzi emafaira anga akaora, uye ndisati ndawana chirongwa ichi, yaivhiringidza komputa yangu, ichi ndicho chimwe chezvirongwa zvakanakisa zvandakashandisa, im going to reccomend it to friends.
Izvi zvakashanda zvakakwana! Ndokutenda zvikuru! Iwe waponesa timu yangu kubva
kudzokera kuita 16 mwedzi yebasa zvakare. DZIPR yaive yakakosha iyo
$ 30 ini
$ 30 yandakashandisa!
Ndakaedza zvigadzirwa zvakawanda mukuda kwangu kudzoreredza a Zip faira raive negore rakazara ree-mail matura asi asiri akabudirira, kusvikira zvino. Ini
Ndakaedza zvigadzirwa zvakawanda mukuda kwangu kudzoreredza a Zip faira raive negore rakazara ree-mail matura asi asiri akabudirira, kusvikira zvino. Ini ndakadzora demo vhezheni yaDZIPR uye ndakakurudzirwa nemushumo wekudzoreredza saka ndakaisa mari shoma ndokutora yakazara vhezheni.
Kukushamisika kwangu, icho chizere chigadzirwa chakatadza kudzoreredza yangu faira saka ndakaonana nerutsigiro @ kugadzirisa-zip-files.com. Iyo Tech Support reps yakakumbira matanda ekukanganisa kubva kuDZIPR uye mushure mekunyatsoongorora, vakaratidza maitiro kwandiri kuti ndiedze. Zvakashanda!
Ichi chigadzirwa uye nekambani yakanakisa technical tsigiro yakachengetedza akakosha marekodhi andaifunga kuti aive lost zvachose. Ndatenda!
3GB yemifananidzo yakangochengetwa! Koreji yekupedza uye musikana mafoto akaponeswa! Ndatenda.
Feature zano: kugona kunyora
Feature zano: kugona kunyora izvo mafaira asina kuchengetwa?
Gwaro rakagadziriswa reOpenOffice rinoshanda sedumwa! Thumbs-kumusoro kwaDZIPR!
Ichi chigadzirwa chakanaka! Makatiponesa yakawanda nguva. Taura nesu nemamwe maapplication aungave iwe.
Yakagadzirisa zvakaipa zvangu Zip faira, sezvakavimbiswa.
Ini ndaisatenda kuti ichashanda, asi zvinoita.Zvakanyanya kuipa hazvigone kugadzirisa ACE uye RAR mafaera futi.
Ndakaiyedza nefaira rimwe rakakanganisika kubva mufloppy uye rakandishandira. Mafaera mashanu chete kubva makumi mana akakuvara mune imwe nhanho.
Kudzoreredza zvese zvangu zvakakanganisika *.zip mafaira. Dambudziko chete raive rekuti raive nedambudziko ne *.zip mafaera iwo pachawo anga ave zipped. Zvikasadaro gumi kunze
Kudzoreredza zvese zvangu zvakakanganisika *.zip mafaira. Dambudziko chete raive rekuti raive nedambudziko ne *.zip mafaera iwo pachawo anga ave zipped. Zvikasadaro gumi kubva gumi!
Mazhinji ndinokutendai nekukurumidza email.
Ndakaedza izvi uye zvese zvainge zvichishanda sekurota!
Kutenda kuzhinji, ndakakwanisa kupora kupfuura 900 MB!
Ndine chigadzirwa chizere, chinondibatsira kugadzirisa faira reMBMB
WOW! Iwe wakandichengetera maawa maviri ekukosha kwenguva uye rwendo rwekudzoka nekuyambuka guta. Ndatenda!
Zvinozorodza kuona chirongwa chiri nyore chinobatsira kunze uko
Zvinozorodza kuona yakapusa chirongwa chinobatsira kunze uko chinoshanda chaizvo! Ndakaiyedza pane zvaifungwa ndisingafungi kuti zvaizoshanda. DZIPR akandirova!
"YAY INOGADZIRA ZVINOKanganisa CRC: D"
Most yenguva yako yakamonyororwa zvakapusa kana iwe ukatora a zip file uye ine crc kukanganisa, kunyanya kana iyo zip faira
Most yenguva yako yakamonyororwa zvakapusa kana iwe ukatora a zip file uye ine crc kukanganisa, kunyanya kana iyo zip faira rine chete ISO faira. Ichi chigadzirwa chakagadzirisa iyo CRC kukanganisa mune yangu zip faira uye akanditendera kuti ndibvise iyo ISO faira isina zvikanganiso!
Icho chirongwa chakanyatsonaka, chevanhu avo vanotora mahwindo makuru esfx paInternet ari kukuvara ini ndinokurudzira iyi software! it
Icho chirongwa chakanyatsonaka, chevanhu ivavo vanodhawunirodha hombe sfx mafaera pane internet ayo ari kukuvara ini ndinokurudzira iyi software! inogadzirisa zip mafaera uye sfx mafaera akanaka! asi ndinofunga software iyi inoda kugona kugadzirisa rar mafaera zvakare :(
Ndizvozvo! Unogona kushandisa chikamu chakatsanangurwa pawebhusaiti yako kana chero bhuku rekusimudzira. Ndiitirewo nyasha ndigadzirise kunze kweCRC chirevo, kubvira CRC uye
Ndizvozvo! Unogona kushandisa chikamu chakatsanangurwa pawebhusaiti yako kana chero bhuku rekusimudzira. Ndiitirewo nyasha ndigadzirise kunze kweCRC chirevo, nekuti CRC uye Cyclic Redundancy ndizvo chaizvo chikanganiso chimwe chete. Kana iwe uchida kunyangwe kurumbidzwa, nhasi, ini ndagamuchira iyo yekuvandudza kuburikidza neemail ye shareware utility yaive ne CAB faira mu Zipfaira. Zvakanaka, Hwinazip, PKZip & WinAce vese vakataura kuti iyo faira yakanga yakashata uye yaisakwanisa kuvhurwa. Ndakamhanya nayo kuburikidza naDZIPR uye kwete chete iyo iyo zipfaira inogadziriswa, asi yakavharwa CAB faira yaive chaiyo byte ye byte mechi kune cabfaira ini yandaida yekuvandudza. Zvinotaridza kuti uyu mudiki DZIPR Gem chimwe chinhu Microsoft chinofanira kupihwa rezinesi. Thanks zvekare,
Iwe uchawana vhoti yangu yeakanakisa PC utility. Sezvo ndakatenga DZIPR, ndamboishandisa kanoverengeka pane mafaera airatidza yakaipa CRC kana aive nemamwe
Iwe uchawana vhoti yangu yeakanakisa PC utility. Sezvo ndakatenga DZIPR, ndamboishandisa kanoverengeka pane mafaera airatidza yakaipa CRC kana ane mamwe matambudziko akakonzera Winzip kana WinAce kuvhara uye kumisa kugadzirisa. DZIPR yakagadzirisa zvese zvandakakanda pairi. Icho chinoshamisa uye chakanakisa chimedu che software engineering.
Ndinongoda kukutendai. Ndakatenga DataNumen Zip Repair zvishoma
maawa maviri apfuura uye zvakashanda zvakakwana !!! Zvakaitika kwandiri zvinogona kupfupikiswa
maawa maviri apfuura uye zvakashanda zvakakwana !!! Chiitiko changu chinogona kupfupikiswa mukati
WAKADZIDZA BASA RANGU!
Ini ndinodhawunirodha iyo izere chirongwa zvakare & yese yekugadzirisa data ini ndinoitumira kune yangu comp. Nenzira iyoyo chirongwa CHINOSHANDA zvakanaka kwazvo uye gadzirisa 91% yedhisiki rangu !!!
Ini ndakaponesa almost, data rangu rese rakakosha !!!
Kutenda nechirongwa DZIPR! Inoshanda chaizvo!
Izvo zvakashanda zvikuru. Ndatenda nerubatsiro rwenyu.
Mhoro. Ini ndichangotenga chirongwa chako, uye chakagadzirisa chakakosha ZIP faira. Ndatenda.
Ndatenda nerubatsiro rwenyu. Ndiri kufara kwazvo naDZIPR.
Kutarisana Nemapeji Photography
Ini ndaive ne800 MB zipfaira ine 97,00 yakagadzirwa muSolaris yakawana kukanganisa mu "central dir" yayo. Kana izvi zvaitika, ini ndaisakwanisa kuwana zvinopfuura iyo
Ini ndaive ne800 MB zipfaira ine 97,00 yakagadzirwa muSolaris yakawana kukanganisa mu "central dir" yayo. Kana izvi zvaitika, ini ndaisakwanisa kuwana zvakapfuura yekutanga ~ 30,000, uye chiyero zipgadzirisa zvinoshandiswa zvinouya sechikamu chePKzipc uye WinZip akaita _nothing_ kubatsira.
Izvi zvainyanya kushungurudza nekuti ndaiziva most kana mafaera ese anga achiri imomo - yaingova mhosho mune "tafura yezviri mukati" yezvakachengetwa.
Ndaishandisa Datanumen's DZIPR kudzoreredza 98% emafaira ari mudura! Ndiri kufara kuwana kambani yakaita Datanumen iine zivo yekubvisa zvakanaka zvinhu kubva mudura, kunyanya kana iyo yepakati dir yakaora.
Cleanscape Software Nyika dzese
Izvi zvakashanda zvakakwana. Ndatenda!
Ndakawana chishandiso chako ndichiri kushandisa webhusaiti http://rmse.awardspace.com uye ndoda kutaura kuti chishandiso chako chinotyisa nezvakawanda maficha.
Ndakawana chishandiso chako ndichiri kushandisa webhusaiti http://rmse.awardspace.com uye ndinoda kutaura kuti chishandiso chako chinotyisa nezvakawanda maficha. Kwakanaka Basa. Kana iwe uine runyorwa rwekutumira kana tsamba tsamba ndapota ndisainire ini. Zvido, JA
Usambofa wakazvifunga, zvakashanda! Ndiri SOOO HAPPY! Ndinokutendai zvikuru nerubatsiro rwenyu rwese! Ini zvino ndagutsikana ne100% uye ndicharega kukunetsa. lol. NDATENDA
Usambofa wakazvifunga, zvakashanda! Ndiri SOOO HAPPY! Ndinokutendai zvikuru nerubatsiro rwenyu rwese! Ini zvino ndagutsikana ne100% uye ndicharega kukunetsa. lol. NDATENDA PATSVA!
Ndinokutendai zvakare nerubatsiro rwese rwamakapa, uye ini ndinokurudzira ichi chigadzirwa kune chero munhu ane dambudziko rakafanana!
Uye zvakare, MN, USA
Ini ndakabudirira kubvisa data.
Ini ndaifunga kuti ndaifanira kusiya rese data ...
Ini ndinonyatsokoshesa yako
Ndinotenda chaizvo nerubatsiro rwenyu, maita basa zvekare.
Ndatenda nemhinduro yako inokurumidza uye yakakwana. Mhinduro yako yakashanda! Yakakura File Splitter software yakashanda, uyezve Yepamberi Zip
Ndatenda nemhinduro yako inokurumidza uye yakakwana. Mhinduro yako yakashanda! Yakakura File Splitter software yakashanda, uyezve Advanced Zip Repair akadzorera yega faira!
Ini zvino ndagutsikana kwazvo mutengi, uye ndiri kufara kuramba ndichishandisa chigadzirwa. Ndinokutendai zvakare, uye muve nezuva rakanaka.
Isu taive ne60 Gigabyte zip faira iyo yaisazovhura. Advanced Zip Repair haina kukwanisa kuigadzirisa sezvo yaive yakakura kwazvo. Zvisinei, DataNumen akandipa
Isu taive ne60 Gigabyte zip faira iyo yaisazovhura. Advanced Zip Repair haina kukwanisa kuigadzirisa sezvo yaive yakakura kwazvo. Zvisinei, DataNumen yakandipa chimwe chidimbu chikuru che software whcih kupatsanura iyo faira mune mamwe anotarisirwa 1 maGigabyte mafaera, uyezve Advanced Zip Repair kubudirira kugadzirisa yega yega yega. Isu tanga taedza akasiyana siyana ekugadzirisa zvigadzirwa pasina kubudirira, saka ndichave ndichidzoka ku DataNumen kana tiine chero mamwe matambudziko e data mune ramangwana. Zvigadzirwa zvakakosha uye rutsigiro rukuru!
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen Zip Repair v3.5
Unogona kugadzirisa ese madiki-mhando e Zip mafaera nemhando dzese dzekubvisa-wega mafaera.
Tarisa data kuvimbika uye gadzirisa zvisiri izvo CRC kukosha mune yekuchengetedza.
Kutsigira kugadzirisa Zip mafaera uye Zip chinhu mafaera akakura kupfuura 4GB.
Tsigiro yekugadzirisa yakapetwa Zip mafaera, kupatsanurwa Zip mafaira uye akavharidzirwa Zip mafaira.
Kutsigira kugadzirisa Zip mafaira pane zvakashata midhiya, senge floppy disks, Zip disks, CDROMs, nezvimwe.
Tsigiro yekugadzirisa batch yemafaira.
Tsigiro kuti uwane uye sarudza iyo Zip mafaira kuti agadziriswe pakombuta yemutengi.
Tsigiro yekubvisa zvakadzorerwa zvinhu mune yakatarwa Zip kana SFX dura.
Yakabatanidzwa neWindows Shell, kuti iwe ugone kugadzirisa iyo faira ine mamiriro (kurudyi tinya) menyu yeWindows Explorer nyore.
kushandisa DataNumen Zip Repair Kudzoreredza Zvakakuvara Zip matura oruzivo
Kana zvako zip mafaira akakuvadzwa kana akaora uye haugone kuvhura zvakajairika, unogona kushandisa DataNumen Zip Repair kuongorora iyo zip mafaera uye kudzoreredza yakawanda data kubva kwavari sezvinobvira.
Cherechedza: Usati wadzorera chero chakakuvara kana chakaora zip mafaira ane DataNumen Zip RepairNdokumbirawo muvhare chero mamwe maapplication anogona kugadzirisa iyo zip mafaira.
Sarudza iyo yakakuvara kana yakashata zip faira ichagadziriswa:
Unogona kuisa iyo zip faira zita zvakananga kana tinya iyo
bhatani kuti uwane iyo zip faira kuti igadziriswe pakombuta yemuno.
By default, DataNumen Zip Repair ichagadzirisa iyo zip faira uye bvisa zvinhu zvese zvirimo kudhairekitori inonzi xxxx_recovered, uko xxxx ndiro zita rezvinobva zip faira. Semuenzaniso, for source zip faira Yakakuvara.zip, iyo default kuburitsa dhairekitori ichave Yakakuvara_kuwanikwazve. Kana iwe uchida kushandisa rimwe zita, ndokumbira usarudze kana kuriseta saizvozvo:
Iwe unogona kuisa zita rekuburitsa zita zvakananga kana kubaya iyo
bhatani kuti utarise uye sarudza dhairekitori rinobuda.
bhatani, uye DataNumen Zip Repair kuda start kuongorora uye kugadzirisa sosi zip faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure mekugadzirisa maitiro, kana iri sosi zip faira rinogona kugadziriswa zvinobudirira, iwe uchaona iro meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura dhairekitori rekuburitsa uye uwane izvo zvinhu mune iyo Zip ikwidzwe.
DataNumen Zip Repair 3.5 inoburitswa muna Chivabvu 4, 2021
DataNumen Zip Repair 3.2 inoburitswa muna Zvita 19, 2020
DataNumen Zip Repair 3.0 inoburitswa muna Gumiguru 30, 2020
DataNumen Zip Repair 2.9 inoburitswa muna Chivabvu 5, 2020
Tsigiro yekuratidza danda mumatanho akasiyana.
DataNumen Zip Repair 2.8 inoburitswa muna Kubvumbi 22, 2020
Kuvandudza mwero wekudzoreredza wezvinhu zvakavharirwa.
DataNumen Zip Repair 2.7 inoburitswa muna Gumiguru 21, 2019
Kuvandudza mwero wekudzosa kwezvinhu zvine huwori zvishoma.
DataNumen Zip Repair 2.6 inoburitswa muna Nyamavhuvhu 20, 2019
DataNumen Zip Repair 2.5 inoburitswa munaNovember 7th, 2018
DataNumen Zip Repair 2.3 inoburitswa muna Kubvumbi 10, 2018
Auto bvisa zvinhu zvadzoreredzwa mu Zip Archive.
DataNumen Zip Repair 2.2 yakaburitswa munaGunyana 21, 2013
Kuvandudza iko kudzoreredza.
DataNumen Zip Repair 2.1 yakaburitswa muna Chikunguru 21, 2013
Natsiridza rutsigiro kumafaira makuru.
DataNumen Zip Repair 2.0 yakaburitswa munaNovember 23, 2012
Nyorazve injini yese yekudzosa.
tsigira Zip faira uye Zip chinhu chakakura kupfuura 4GB.
DataNumen Zip Repair 1.8 yakaburitswa muna Gumiguru 25, 2006
Natsiridza rutsigiro kune rwakatambanudzwa / kupatsanurwa zip mafaira.
Kugadzirisa uye kupora huori Microsoft negadziriro yeparutivi (BKF) mafaera.